(ပဲခူးတိုင်း အနောက်ဘက်ခြမ်း ပဋိပက္ခ သတင်းများ) ~ ဒီမိုဝေယံ
(ပဲခူးတိုင်း အနောက်ဘက်ခြမ်း ပဋိပက္ခ သတင်းများ)
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နတ္တလင်းမြို့မြင်ကွင်း
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၅၀ မိနစ်
မတ် ၂၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းက နတ္တလင်းတွင် လူအုပ်စုများဖွဲ့ပြီး ဆိုင်ခန်းများကို ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်သည့် အတွက် လူနေအိမ် ရှစ်လုံး၊ ဆိုင်ခန်း ၁၂ ခန်းနဲ့ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတစ်ခု ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သဲကုန်းမြို့နယ် အင်းမကျေးရွာ၌ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ တစ်ခုကို လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်မှု ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဇီးကုန်းမြို့၌ ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက် ဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် လူနေအိမ် ၁၄ လုံးနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ တစ်လုံး ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း၊ အုတ်ဖိုမြို့နှင့် ဇီးကုန်းမြို့များ၌ လာရောက်ဖျက်ဆီးသူများကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များက သေနတ် ပစ်ဖောက်ပြီး လူစု ခွဲခဲ့ရကြောင်း၊ ဇီးကုန်းမြို့ လုယက် ဖျက်ဆီးမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု ယူဆရသူ ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်းနှင့် သတင်းအသေးစိတ်ကို နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တနသာင်္ရီတိုင်း မြိတ်မြို့မှ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီ အန္တရာယ်..
၂၀၁၃ ဧပြီ (၁) ရက်နေ့ တွင်ကျရောက်မယ့် ကြားဖြတ်ရွေးေ...
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် Micheal Learns To Rock အဖွဲ့ ရန...
ပဟေဋိများစွာဖြင့် တပ်မတော်နေ့ (မောင်ထိန်ဝင်း မရမ်း...
ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နာရေ...
ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးမှသည် မဝေးလှသော အနာဂတ်နိုင်ငံေ...
၂၅ရက်နေ့ည ရန်ကုန်မြို့ မြင်ကွင်းများ..
ကောလာဟလ ထုတ်လွှင့်မှုအချို့ကြောင့် မင်္ဂလာဈေးနှင့် ယု...
မင်္ဂလာတောင်ညွှန်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော သတင်းများ မဟုတ်မှန...
မတ်လ ၂၄ ရက် ညပိုင်းက မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်အတွင်း...
Weekly Eleven Journal 8-25
သားကောင်သစ် မိတ္ထီလာ ...
The Voice Journal 9-12
မိတ္ထီလာမြို့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ အခြေအနေ
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ အရေးအပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာချက် (ညနေ ၄နာ...
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် နောက...
(မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင...
အိမ်ရှင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ တည့်အောင်နေဖို့လို (သီတဂူဆရာ...
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် နော...
မတ်လ ၂၁ရက် မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်းများ..
မိတ္ထီလာမြို့ပဋိပက္ခ နောက်ဆုံးရ အခြေအနေ (မတ်လ ၂၀ ရက်...
အောင်ဆန်းသမီး ရလိုက်တာ အလွန်ကံကောင်းခြင်း သီတဂူဆရာ...
The Voice Weekly ဂျာနယ်..
ဂျပန်နိုင်ငံ Kanda University ၏ သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါ...
ကျန်စစ်သားကို ကျန်စစ်သားလိုမြင် ငရမာန်ကန်းကို ငရမာ...
၂၀၁၅အတွက် မျက်ဖြူဆိုက်နေသူများ သွေးထိုးလှုံဆော်ဖို...
လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးးဋ္ဌာနအကြောင်း တိုင်ကြားစာ ..
အဖွဲ့ချုပ်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ ပြန်ကြားရေး ...
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်သစ်များဖြင့် ရှေ့ဒီမိုကရေစီ ခ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ညီလာခံ မြင်ကွင်းများ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးချယ်ခံထားရသော ညီ...
လားရှိုးစည်ပင်နှင့် မြေစာရင်းဋ္ဌာန တို့၏ အာဏာအလွှဲသုံ...
၀န်ကြီးနဲ့သမ္မတ ဘယ်သူက အထက်ကလဲ…?
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးပွဲ ညီလာခံ...
ဂျော်ဒန်ရောက် CMI အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိ မြန်မာ အလုပ်သ...
တနပ်စား လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးအကြောင်း တစေ့တစောင်း (ပေးစာ)...
အတ္တ၏ သားကောင် (ဆောင်းပါးရှင် အရှင်ဥက္ကဋ္ဌ)